Taliyihii Qaybta gobolka Nugaal oo la badaley iyo taliye cusub oo loo magacaabay qaybta. – Radio Daljir
Taliyihii Qaybta gobolka Nugaal oo la badaley iyo taliye cusub oo loo magacaabay qaybta.
Maarso 23, 2013 8:14 b 0
Garoowe,23 March 2013 Tiliska qaybta gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa ?loo macagaabay G/dhexe C/raxmaan Xaaji Abshir oo horay xilkaas u soo qabtay.
Taliyaha ciidanka Booliska Puntland Sareeye Guuto Maxamed Siciid Jaqanaf oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta taliska qaybta gobolka Nugaal ayaa ku dhawaaqay magacaabista taliyaha cusub ee qaybta gobolka Nugaal C/raxmaan Xaaji Abshir isagoo sidaas oo kale isbadalo lagu sameeyey qaar ka mid ah hogaamada ciidanka Boliska Puntland.
Taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay taliska qaybta gobolka Nugaal ayaa isna la hadlay saxaafada isagoo sheegay inuu ku dadaali doono hawlaha ammaanka Gobolka Nugaal.
Taliska qaybta gobolka Nugaal ayaa waxaa laga badaley Faarax Warsame C/raxmaan oo mudo xilkaasi soo hayey waxaana maanta lagu wareejiyey C/raxmaan Xaaji Abshir.
Taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay Taliska qaybta gobolka Nugaal ayaa horay xilkaan u hayn jirey waana markii labaad oo uu qabto xafiiska taliska qaybta gobolka Nugaal
Magacaabista Taliyaha qaybta gobolka Nugaal ayaa ku soo aadaysa ? xili ay fiicantahay xaalada ammaan ee gobolka Nugaal.
?Diiwaanka wararka Daljir?
Caawa iyo Daljir, Isniin, March 23, Maxamed C Cali ‘Kooshin’ ( Muqdisho Soomaaaliya )